အလင်းရောင်ကြယ်များ: December 2014
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/30/2014 06:37:00 pm 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
AIR KBZ လေယာဉ်မှူး တစ်ဦးထံမှ မူးယစ်ဆေးဝါးများဖမ်းမိ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တာမွေမြို့နယ်တွင် ယခုလ ၂၆ရက်၌ ယာဉ်စစ်ပိတ်ဆို့ ဆောင်ရွက်နေစဉ် ယာဉ်အမှတ် 7C/….မတ်တူးအဖြူရောင် ယာဉ်မောင်းနှင်လာသူ AIR KBZ လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးထံမှ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/30/2014 06:28:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နော်အုန်းလှနှင့် ဦးနေမျိုးဇင်တို့ကို ပုဒ်မ ၃ ခုဖြင့် တရားစွဲပြီး အင်းစိန်ထောင်ပို့
ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်သံရုံးရှေ့မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ညက ဆန္ဒပြလို့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ နော်အုန်းလှ၊ ဦးနေမျိုးဇင်နဲ့ မစိန်ဌေးတို့ကို ဖမ်းဆီးပြီး ပုဒ်မ ၃ ခုနဲ့ တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/30/2014 06:23:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပင်လယ်ထဲတွင် တွေ့ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများသည် အဲအေးရှား လေယာဉ်မှဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူ အတည်ပြု
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/30/2014 06:20:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Water poisoning ရေအဆိပ်သင့်ခြင်း ••••
ရေဆိပ်သင့်ခြင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပေမဲ့ သောက်တဲ့-သုံးတဲ့ရေထဲမှာ အဆိပ်ပါတာ မဟုတ်ပါ။ ရေသန့်ဗူးထဲကရေတွေ တအားကြီး သောက်ရင်လဲ အဆိပ်သင့်နိုင်တာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးစာနဲ့ဆို Water intoxication လို့ ခေါ်တယ်။ သေကောင်း သေနိုင်တယ်။ ဦးနှောက် လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်စေမယ်။ Electrolytes ဓါတ်ဆားအချိုးအစား မမျှရာကနေ Hyponatremia ခေါ်တဲ့ (ဆိုဒီယမ်) နည်းတာဖြစ်စေတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/28/2014 08:02:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အခင်းမဖြစ်ပွားခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းက တွေ့ရသည့် သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ မင်းအုပ်စိုး (ဓာတ်ပုံ – သဲသဲ / ဧရာဝတီ)
သရပါ မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာဖြစ်သူ မနုနုယဉ်(ခ) တေးနုယဉ်အား ထိုးကြိတ်ရာမှ သေဆုံးခဲ့မှုကြောင့် သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ မင်းအုပ်စိုးကို ယမန်နေ့က ဗဟန်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင် လူသတ်မှုဖြင့် အမှုဖွင့် ရုံးထုတ်၍ ရမန်ယူပြီး အင်းစိန်ထောင်သို့ ပို့လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက် နံနက် ၂ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မင်းအုပ်စိုးက ညီမ၀မ်းကွဲဆိုသူ သရပါ မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ မနုနုယဉ်(ခ) တေးနုယဉ်အား ၄င်း၏နေအိမ်တွင် လက်သီးဖြင့် ထိုးခြင်း၊ ဆောင့်တွန်းခြင်း၊ ကိုင်ဆောင့်ခြင်း၊ ခြေထောက်ဖြင့် ကန်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရဲတာဝန်ရှိသူ တချို့၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/28/2014 07:31:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တေးသံရှင် ရင်ဂို မဲပေးခွင့်မရခြင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရ
ညနေ၂ နာရီ ၄၅မိနစ် မှာဦးနေထိုင်တဲ့ အလယ်ရွှေဂုံ တိုင်ရပ်ကွက် ဗဟန်းမြို့နယ်
က မဲရုံကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခြံဝ ရောက် ရောက်ခြင်းမှာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်
ရေးမှူးက ဦးရင်ဂိုကိုပြောတယ်။ မဲပေးဖို့ ခင်ဗျားမပါဘူးဆိုပြီးပြန်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီအပြင် ဘေးကကလေး ကိုပြောသ လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/28/2014 07:23:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အင်ဒိုနီးရှားမှ စင်ကာပူသို့ ပျံသန်းထွက်ခွာလာသော လေယာဉ်တစ်စီး ပျောက်ဆုံးနေ
On Sun, 2014-12-28 16:09Issue No.No.606 Sunday, December 28, 2014
နောက်ဆုံးရသတင်းများအရ ၊ QZ8501 ကို နောက်ဆုံးခြေရာခံမိခဲ့သည့် နေရာတွင် သင်္ဘောခြောက်စီးနှင့် ဟယ်လီကော်ပတာ နှစ်စီးကို တပ်ဖြန့်ချထားသည်။
အဲရ်အေးရှ လေယာဉ် QZ8501 ပျောက်ဆုံးနေသည်မှာ ယခုဆိုလျှင် ၉ နာရီဝန်းကျင် ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လေယာဉ်တွင် ၄ နာရီခွဲစာ ပျံသန်းရန်သာ လောင်စာဆီပါသွားသည်ဟု အင်ဒိုနီးရှား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးကပြောကြောင်း တရုတ်သတင်းဌာန CCTV က ဖော်ပြခဲ့သည်။
အိမ်ဖြူတော်ကလည်း ပျောက်ဆုံးလေယာဉ် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေကြောင်း၊ အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက် အိုဘားမားကလည်း ဤအရေးအတွက် ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ် ရာဇက်ကလည်း ပျောက်ဆုံးအဲရ်အေးရှလေယာဉ် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအတွက်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/28/2014 07:13:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
x'mas ညက မင်းအုပ်စိုးရဲ့လူသတ်မှု...
၂၅.၁၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၄၃၀ အချိန်တွင် ဗဟန်းမြို့နယ်နေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုး (ခ) ကိုအောင်နိုင်ထွန်း၊ (၄၄)နှစ်မှ ဗဟန်းမြို့မ ရဲစခန်းသို့ရောက်ရှိ လာပြီး ၎င်းသည် ၀၂၃၀ အချိန်ခန့်က အတူနေညီမ၀မ်းကွဲဖြစ်သူ မနုနုယဉ်(ခ) တေးနုယဉ်၊ (၃၃)နှစ်အား လူမှုရေး ကိစ္စတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစဉ် အမှန်အတိုင်း ပြောဆိုခြင်း မရှိသောကြောင့် စိတ်ဆိုး ဒေါသဖြစ်ပြီး မနုနုယဉ် (ခ)တေးနုယဉ် ကို ၎င်း၏အိပ်ခန်းအတွင်း၌ လက်သီးဖြင့် ထိုးခြင်း၊ ဆောင့်တွန်းခြင်း၊ ကိုင်ဆောင့်ခြင်း၊ ခြေထောက် ဖြင့်ကန် ခြင်းများပြုလုပ်မိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် မနုနုယဉ်(ခ)တေးနုယဉ်မှာ ကုတင်ပေါ်တွင် လဲကျငြိမ်သက်
သွားကြောင်းကို အကြောင်းကြား လာခဲ့ပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2014 07:17:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒေါ်ခင်ဝင်းသေဆုံးမှု အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်
သတင်း ဓာတ်ပုံ အိမမမွန်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2014 06:50:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မီးရထားသံလမ်း တံတား
ဂုတ်ထိပ်တံတား (Goteik viaduct) အမည်ရ တောင်ကြားဖြတ် မီးရထား သံလမ်း တံတား ရဲ့ တည်နေရာကတော့ ရှမ်းပြည်နယ် အနောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့အနီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2014 06:45:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးတွင် ယာဉ်တိုက်မူဖြစ် (၇)ဦးသေဆုံး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2014 06:44:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အရပ်ဖက်-စစ်ဖက် ဆက်ဆံရေး ••••••••
အာဏာရှင်စနစ်က ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူး ပြောင်းတဲ့နည်း သုံးမျိုးရှိတယ်လိုပ ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အစိုးရက ဦးဆောင်ပြီး အသွင်ကူးပြောင်း တဲ့နည်း၊ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူ လက်တွဲပြီး အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့နည်း နဲ့ ပြည်သူလူထု ဦးဆောင်ပြီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2014 06:40:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2014 06:38:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကင်ညာနိုင်ငံက အကြမ်းဖက်ခံ အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ဘ၀ ••••••••••
ကင်ညာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကို ထိမ်းမြားလက်ထပ်ဖို့ရန် ခန်းဝင်ပစ္စည်းကြေးအဖြစ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့လဲလှယ်ခြင်းခံရပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ပွဲကာလမှာတော့ တော်တော်ကို စိတ်နှလုံးကြေကွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2014 06:37:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရွှေနိုင်ငံ(သို့ မဟုတ်) သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သယံဇာတပစ္စည်းများ ပေါကြွယ်ဝကြောင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံထားကြသည် ၊ သယံဇာတပစ္စည်း ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ထဲတွင် ၊ ကျောက်စိမ်း ပတ္တမြား စသည်တို့ကိုသာမြင်လာမိ၏ ၊
အမှန်မှာ ထိုကျောက်သံ ပတ္တမြားသည် နိုင်ငံတော်အတွက် ၊ အသေးအမွှား ပစ္စည်းကလေးများသာဖြစ်၏ ၊ ဥပမာ ၁၉၉၁ / ၉၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ - ၉၆ ခုနှစ်အတွင်း (စစ်အစိုးရလက်ထက်) နိုင်ငံတော်မှရရှိသော
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2014 06:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နိုင်ငံရေးနှင့် ကိုယ်ကျင့် တရား
" နိုင်ငံရေးဆိုတာ လှုမှု့ ရေးပေပဲလား "
တကယ်တော့ ဒီလောကမှာ အမျိုးသားနိုင်ငံတွေ (Nation State) မြို့ပြနိုင်ငံတွေ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွေ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ ပြီးနောက် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားတွေ အစိုးရတွေ
နိုင်ငံရေးပီပီပြင်ပြင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ တာပါ။
နိုင်ငံရေး(Politic) ဆိုသောဝေါဟာရဟာ ဂရိဝေါဟာရပေါ်လစ်တီကို (Politikos) မှဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2014 06:17:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဆေးသိပံအမြင်ရှု့ ထောင့်ကနေတရားသဘောဖြင့် ကြည့် ပါ
ကလေးမွေးပုံအဆင့်ဆင့်ကို အခုမှ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ဖူးလို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါမှငါဆိုပြီး အထင်ရောက်နေတဲ့သူတွေ ကိုယ်တွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဒီလောကထဲရောက်လာလဲဆိုတာကို သတိရစေချင်ပါတယ်။မွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းကာလဖြစ်တဲ့ ကာလတိုလေးမှာ အတ္တတွေ လောဘတွေနဲ့ ရှင်သန်သင့်သလားဆိုတာကို ကျနော်တို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/20/2014 05:22:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ညက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပူပူနွေးနွေး ဖြစ်ရပ်ပါ။ ဘန်ကောက်ကနေ တရုတ်နိုင်ငံ နန်ကျင်းကို
ပျံသန်းတဲ့ အဲအေးရှား လေယာဉ်ပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။
လေယာဉ်ခ သက်သာတဲ့ ဘတ်ဂျက်လေကြောင်းလိုင်း ဆိုတဲ့ အတိုင်း ထိုင်ခုံ နေရာ
ရွေးလို့ အတူ ထိုင်ချင်ရင်တောင် ပိုက်ဆံပေးရတာဆိုတော့ တရုတ်ပြည်က
လင်မယားစုံတွဲက ထိုင်ခုံကို ပိုက်ဆံပေးပြီး မရွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဗျ။
အဲဒီမှာတွင်ဇာတ်လမ်းစတော့တာပါပဲဗျ။ လေယာဉ်ပေါ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ လင်နဲ့
မယား တကွဲစီ ထိုင်ရကောင်းလားဆိုပြီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/15/2014 06:41:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်မျိုးကို သိကြမှာပါ။ လက်နက်ကိုင် တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့က မြို့လယ်ခေါင် လူစည်ကားရာ နေရာက စားသောက်ဆိုင်၊ ဘဏ်နဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို အနုကြမ်းစီးပြီး ဓားစာခံများကို အထဲမှာ ထားထားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်ဖူးလို့ ရုပ်ရှင်ထဲကို ရောက်လာတာပါ။ ယခု ယင်းဖြစ်ရပ်ဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့လယ်ခေါင်က ကော်ဖီဆိုင် (Lindt Cafe) တစ်ခုမှာ ဖြစ်နေပါပြီ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/15/2014 06:37:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
••• ဟားမက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစ္စရေးကို ဖျက်စီးရန် သန္နိဋ္ဌာန် ပြု ••••••
ဟားမက် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင် ၂ ထောင် ၀န်းကျင်ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ဂါဇာမြို့မှာ ချီတက်စစ်ရေးပြရင်း အစ္စရေးကို ဖျက်စီးဖို့ သန္နိဋ္ဌာန် ပြုလိုက်ကြပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဝါဒီ ဟားမက်အဖွဲ့ ထူထောင်ခြင်း ၂၇ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ချီတက်တာပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/15/2014 06:32:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အိန္ဒိယ နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကြား ဟိမဝန္တာတောင်တန်းရဲ့အရှေ့ဘက်အစွန်းကျတဲ့ နေရာမှာတည် ရှိတဲ့ နိုင်ငံငယ် လေးဖြစ်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/15/2014 06:30:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
(တပ်မတော် ဘယ်တော့မှ လက်နက်မချ)
လေးစားပါတယ် ဒုမှုးကြီး ရဲမင်းထွန်း
" စစ်တို့၏ သဘောသည် အင်အားနည်းသည်များသည် မဆိုသာ
လုပ်ရည်ကြံရည်နှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိသာ အရင်းတည်သည်တဲ့"
အင်အား ၂၀၀ နဲ့ အင်အား ၁၀၀၀ ကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/15/2014 06:26:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဘိုးတော် ခဝိုင်း၏ လူမဆန်သော လုပ်ရပ်
အာရကန်နိုင်ငံတော်အားသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဘိုးတော်ခဝိုင်းသည် ဗခီးပြည်နယ်မှ ယူဆောင်လာသော ဝိနည်းတော်နဲ့ မညီသည့် ဦးပဉ္ဇင်းများ၊ကိုရင်များ၊ဒွန်းဇဏ္ဍားများ၊မဟာယာနဂိုဏ်းဝင် ရဟန်းသံဃာများကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/15/2014 06:21:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ် တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသော စာရွက်စာတမ်း များကို ခိုးယူခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံသား တရားစွဲခံရ
The Chinese man was stopped at the John F. Kennedy International Airport in August for carrying undeclared cash.
ဘရစ်ပို့တ် ၊ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2014 06:45:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အာရှ၏ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အလီဘာဘာ ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူ ဂျက်ခ်မာ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခံရ •••••••
ပေကျင်း ၊ ၁၄-၁၂-၂ဝ၁၄
ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ကြီးက အာရှတိုက်၏ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၈ ဒသမ ၆ ဘီလီယံကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော အလီဘာဘာ အွန်လိုင်း ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်သူ ဘီလီယံနာ သူဌေးကြီး ဂျက်ခ်မာ အား ရွေးချယ် သတ်မှတ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2014 06:42:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ထိုင်းဘုရင့်သားရဲ့ ကြင်ယာတော် တော်ဝင်ဘွဲ့ စွန့်လွှတ်
ထိုင်းဘုရင့်သားတော် မင်းသား မဟာနှင့် ကြင်ယာတော်၊ ဓာတ်ပုံ- EPA
ထိုင်း ဘုရင့်သားတော် မင်းသား Maha Vajiralongkorn ရဲ့ ကြင်ယာတော်ထံက တော်ဝင် အဆောင် အယောင် ဘွဲ့တံဆိပ်အမည်နာမတို့ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းဘုရင် မင်းမြတ် ရဲ့
သောကြာနေ့က ကြေညာချက်မှာ လက်ခံခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2014 06:37:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဇေယျတံတား အဆင်းတွင် ဆီဘောက်ဆာကား မီးလောင်မှုဖြစ် (ဓါတ်ပုံ)•••
၁၄.၁၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၃၁၀ အချိန်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ကမ်းနားအနောက် ရပ်ကွက်၊ အောင်ဇေယျ တံတားအဆင်းတွင် ဆီဘောက်ဆာကား မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း၊ မီးသတ်ယာဉ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများရောက်ရှိ မီးငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2014 06:32:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
စစ်သွေးကြွတွေ လက်ချက်နဲ့ နိုဝင်ဘာမှာ လူ ၅၀၀၀ ကျော် သေ
ဂျီဟတ်ဒစ် စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု တွေကြောင့် နိုဝင်ဘာ တစ်လတည်းမှာ ကမ္ဘာအနှံ့ လူ ၅ ထောင်ကျော် သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ ဘီဘီစီက ပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာမှု တစ်ခုအရ သိရပါတယ်။
အီရတ်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ အာဖဂန် နစ္စတန်နဲ့ ဆီးရီးယား နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံမှာ အသေအပျောက် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း အရေအတွက်ရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ အတွင်း နိုင်ငံပေါင်း ၁၄ နိုင်ငံမှာ အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ၆၆၄ ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ သေဆုံးသူ အရေအတွက်ဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နာရီကို လူ ၇ ယောက်နှုန်း ရှိခဲ့တယ်လို့ အဲဒီ စစ်တမ်းက ဆိုပါတယ်။
အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယား ၂ နိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံ တပ်တွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ နိုဝင်ဘာလ အတွင်း လူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2014 06:27:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
•••• အဲယားကမ္ဘောဇ လေယာဉ် ငှက်နှင့် တိုက်မိ သဖြင့် ပြန်လည် ဆင်းသက် .••••••
အမြင့်ပေ ၃၀၀၀ ခန့်တွင် လေယာဉ်ရှေ့လေကာမှန်နှင့် ငှက်တို့တိုက်မိ ခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည် ဆင်းသက်ခဲ့ပြီး လေယာဉ် ပြောင်းလဲ ထွက်ခွာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2014 06:23:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အကျော်ကြားဆုံး မြန်မာ့ရိုးရာ ဓလေ့စရိုက်များ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2014 06:19:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သရဖူအသိမ်း ခံရသောကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေ မြတ်နိုးကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အနိုင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မေ မြတ်နိုး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရ သည်။
''အခုတော့ မြတ်နိုးနိုင်သွားပါ ပြီ။ မြတ်နိုးဘက်က သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲမှာ အမှန်တရားတွေပဲပြောခဲ့ တယ်ဆိုတာကိုလဲJ (Miss Asia Pac- ific World Super Talent Organi- zation rS CEO ) Choi Young Chul က ဝန်ခံလိုက်ပြီ။ ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာလဲ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2014 06:01:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တရားဝင်ကြေငြာခြင်း(နာရေးဥက္ကဌ ကျော်သူ ဖေ့စ်ဘုတ်မှ)
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/13/2014 07:28:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၁ဝနှစ်အတွင်း လူ၄၂ဦးသတ်ခဲ့ကြောင်း ဘရာဇီးလူသတ်သမားဝန်ခံ ••••••
ရီယိုဒီဂျေနေရိုး ဒီဇင်ဘာ ၁၂
ဘရာဇီးရဲတပ်ဖွဲ့သည် ၁ဝနှစ်အတွင်း လူ ၄၂ဦး သတ်ခဲ့သည်ဟု ဝန်ခံခဲ့သူတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း BBC သတင်း ဌာနက ယနေ့ ဖော်ပြသည်။
ဆေးဆန်ဂရာကက်ဆိုသူ အဆိုပါလူသတ်သမားသည် မြို့ တော်ရီယိုဒီဂျနေရိုးတွင်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/13/2014 07:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သန္ဓေသားအတွက် အသက်ပေးသွားသော ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာရှင် ••••
ဘေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/13/2014 07:23:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒီနေ့နံနက်. ၆:၅၀ အချိန်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းစီတာပာ မလေးရှာနိူင်ငံ မာလာကာ မြို့ syntronixs စက်ရုံမှအလုပ်သမားများကို အော်ပရာစီစက်ရုံအတွင်းထဲထိရောက်ဖမ်းစီသွားပာတယ်passport မရှိသောသူငယ်ချင်းများအမိမြန်မာနိူင်ငံတို့အမြန်ဆုံပြန်နိူင်အောင်ကြိူစားကြပာ အခုinmgreation ဟာအရင်နဲ့လုံဝမတူပာဘူးစစ်အစိုးရနဲ့ပောင်ဖမ်းနေတာဖြစ်ပာတယ် သူငယ်ချင်းအားလုံးအမြန်ဆုံအမိမြေတို့ပြန်နိူင်ကြပါစေ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/13/2014 07:22:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကွန်ဖူးမင်းသား ဘရုစ်လီ ဆိုရင် ဧရာဝတီ ပရိသတ်တွေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဘရုစ်လီဟာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ တာကြာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ကို ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေက အခုထိ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ရှိနေကြပါသေးတယ်။
ဘရုစ်လီနဲ့ အလီဇာဒါ၊ ဓာတ်ပုံ- ရိုက်တာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/13/2014 06:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားပုံတော်ပေါ်၌ VGastro.bar, Buddha bar ဟုရေးသားကာ Ear Phone အား ရုပ်ပွားတော်၏နားတော်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့်သဏ္ဍာန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရေးဆွဲ၍ဖော်ပြခဲ့သဖြင့် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၂)ရပ်ကွက်၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/13/2014 06:49:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
AIR KBZ လေယာဉ်မှူး တစ်ဦးထံမှ မူးယစ်ဆေးဝါးများဖမ်း...
နော်အုန်းလှနှင့် ဦးနေမျိုးဇင်တို့ကို ပုဒ်မ ၃ ခုဖြ...
ပင်လယ်ထဲတွင် တွေ့ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများသည် အဲအေးရ...
တေးသံရှင် ရင်ဂို မဲပေးခွင့်မရခြင်း ရှင်းရှင်းလင်းလ...
အင်ဒိုနီးရှားမှ စင်ကာပူသို့ ပျံသန်းထွက်ခွာလာသော လေ...
ဒေါ်ခင်ဝင်းသေဆုံးမှု အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြပ...
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးတွင် ယာဉ်တိုက်မူဖြစ် (၇)ဦးသေဆုံ...
မန္တလေးမြို့ စည်ပင်ရေ မသန့်မှုကြောင့် မြို့ခံများ အခ...
ကင်ညာနိုင်ငံက အကြမ်းဖက်ခံ အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ဘ၀ ••...
ရွှေနိုင်ငံ(သို့ မဟုတ်) သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသည့် မြန်မာ...
••• ဟားမက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစ္စရေးကို ဖျက်စီးရန် သ...
အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ် တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသော စာရ...
အာရှ၏ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အလီဘာဘာ ကုမ္ပဏီ တည...
ထိုင်းဘုရင့်သားရဲ့ ကြင်ယာတော် တော်ဝင်ဘွဲ့ စွန့်လွှတ...
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဇေယျတံတား အဆင်းတွင် ဆီဘောက်...
စစ်သွေးကြွတွေ လက်ချက်နဲ့ နိုဝင်ဘာမှာ လူ ၅၀၀၀ ကျော်...
•••• အဲယားကမ္ဘောဇ လေယာဉ် ငှက်နှင့် တိုက်မိ သဖြင့်ြ...
၁ဝနှစ်အတွင်း လူ၄၂ဦးသတ်ခဲ့ကြောင်း ဘရာဇီးလူသတ်သမားဝ...
သန္ဓေသားအတွက် အသက်ပေးသွားသော ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာရှင် ...
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားပုံတော်ပေါ်၌ VGastro.bar, Buddha bar ဟ...
••• အစိုးရကောင်းတရပ်ဖြစ်ရေး ဖိလစ်ပိုင်ကျောင်းသားမျ...
ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့် ရွေ...
မှတ်ဖွယ်အပိုင်းအစ ဗဟုသုတ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတများနှ...